Ụkwụ izu ike maka N'okpuru oche, Ụkwụ Stool maka oche na-arụ ọrụ, Ergonomic Nkwado Nkasi Obi Ụfụ Ụfụ Cushion with Hand, Footrest Rocker Pillow maka Ụlọ, Ụlọ ọrụ, Ụgbọ ala, Ụgbọelu na-ebelata Lumbar, azụ, mgbu ikpere.
·【Mgbu mgbu maka ụkwụ, ụkwụ, na n'úkwù】 - Mgbasawanye ahụike ụkwụ na-enyere aka ibelata ihe mgbu nke ịnọ ọdụ n'akụkụ tebụl gị na-akpata ogologo oge.Ụkwụ a dị nro na-ezu ike n'okpuru tebụl ga-eme ka ụkwụ gị, ụkwụ gị, na úkwù adịghị afụ ụfụ mgbe ogologo ụbọchị ọrụ gasịrị.Ịgbanwe na izu ike ụkwụ a dị mma na ergonomic ga-eme ka ị nwee mmetụta kachasị mma n'enweghị nchekasị maka mgbu na ahụ gị dị ala.
·【Otutu-Ebumnobi na Non-Slip Bottom】 - Emebere ya na ala na-adịghị amị amị, ụkwụ a na-ezu ike n'okpuru oche ga-eme ka ụkwụ gị nọrọ n'ọnọdụ ma ghara ikwe ka ọ daa n'ala.Na mgbakwunye, ịnwere ike ịtụgharị ya ma jiri ya dị ka rocker maka mmegharị ahụ agbakwunyere mgbe ọ bụla ike gwụrụ ụkwụ gị.Ị nwekwara ike wepụ ihe mkpuchi ahụ n'ụzọ dị mfe ma tinye ya na igwe ịsa ahụ iji kpochapụ unyi ọ bụla.
·【Supportive Memory Foam】 - A na-eme izu ike a n'okpuru oche site na ụfụfụ ebe nchekwa dị nro ma sie ike nke na-enye ohere ka ụkwụ gị zuo ike ma nwee ahụ iru ala na nke ziri ezi.Foam ebe nchekwa na-enye gị nkwado nkwado maka nkasi obi ụbọchị niile.Ọ dị mma na-eme ka ị chọọ ịgbatị ụkwụ na nkwonkwo ụkwụ gị.
·【Ihe pụrụ iche maka ọnọdụ dị mma】 - ezumike ụkwụ a nwere ihe pụrụ iche nke na-enye ohere ka ụkwụ gị bulie elu n'ọnọdụ dị mma.Ịnọdụ n'oche gị ụbọchị niile nwere ike imebi ọnọdụ gị, mana site na Mgbasawanye Wellness ụkwụ izu ike n'okpuru oche, ị nwere ike imeziwanye ọnọdụ gị nke ukwuu.Naanị dobe ụkwụ gị n'ụkwụ a zuru ike, ma mee ka nhazi ergonomic nke ụkwụ a zuru ike dịkwuo nkasi obi gị.
· 【Conveniently Versatile】 - The footrest na aka, ìhè & obere footrest bụ kọmpat zuru ezu na-ewere ebe ọ bụla (15.2x7.6x3.6in), na ike ga-eji n'ebe ọ bụla ị chọrọ.Jiri ya n'ọfịs, n'okpuru tebụl gị mgbe ị na-arụ ọrụ na kọmputa, n'ụgbọelu, mgbe ị na-egwu egwuregwu, ma ọ bụ ọbụna n'ụlọ.Ọ bụrụ na ị nwere ụkwụ na-adịghị izu ike ma ọ bụ ogologo njem n'ụgbọ ala, ihe mgbochi a bụ maka gị!
ANYỊ nwere ngwọta gị:
Nkasi obi kacha ukwuu: A na-ejupụta n'ụkwụ izu ike anyị na ụfụfụ ọgwụgwọ dị elu, nke kachasị mma dị na ahịa.Nwee anụrị ergonomics nọdụ ala agbakwunyere site na stool ụkwụ anyị nwere ntụ oyi, nke ndị ọkachamara ahụike kwadoro.Yipụ akpụkpọ ụkwụ gị ma mee ka ọbụ ụkwụ gị na-ekpo ọkụ n'ụkwụ anyị na sọks ma ọ bụ akpụkpọ ụkwụ efu iji nweta nnwere onwe na ntụrụndụ kacha!
Uru Uru: Ebe mgbaba ụkwụ anyị dị 15.2 x 7.6 x 3.6 dabara nke ọma n'okpuru tebụl kọmpụta, oche ụgbọ elu, ma ọ bụ dashboard nke oche ndị njem.Nkịta a na-ebugharị ebugharị dị obere ma na-abịa ya na ihe eji ebu maka ịdị mfe njem.Ihe mkpuchi nke mbughari / nke enwere ike ịsacha nwere ntọala na-adịghị ada ada na mkpuchi akụkụ iji gbochie skids & ncha n'ala.
►Uru ​​ọgwụgwọ: Idobe ụkwụ gị elu na ebe mgbakwasị ụkwụ n'okpuru oche nwere ike belata mgbaàmà ndị metụtara ụkwụ, ụkwụ, na mgbu azụ na mgbasa ọbara na-adịghị mma.Ọ bụrụ na ị nwere ọnọdụ ọjọọ, edema ma ọ bụ ọzịza, DVT, ọrịa shuga, fasciitis plantar, gout, ma ọ bụ neuroma, ngwaahịa a nwere ike inye aka!
►ỌTỤTỤ ỌRỤ: 1) Debe ihe mgbochi ọkara ọnwa n'akụkụ n'okpuru ikpere gị mgbe ị na-ehi ụra iji belata mgbu dị ala.2) Jiri ya dị ka ottoman mee ka ụkwụ gị dị elu na tebụl kọfị.3) Tụgharịa n'akụkụ aka gị ka ọ maa jijiji wee mee ụkwụ gị.Yabụ ị nwere ike ịrụ ọrụ, mega ahụ, wee nweta ịhịa aka n'ụkwụ, niile sitere na ntụsara ahụ nke oche gị!
Akụkụ: 15.2 x 7.6 x 3.6 inch
Arọ: 0.99 lbs
Kwesịrị ekwesị maka: Oche Office, Desktọpụ Kọmputa, Ime ụlọ, Patio, Sofa, Recliner
Ngwugwu gụnyere: 1 x Ụkwụ Ụkwụ
Nke gara aga: Ọfịs nkasi obi ebighị ebi Ụkwụ ezumike maka n'okpuru oche - Ergonomic ebe nchekwa ụfụfụ ụkwụ stool ohiri isi maka ọrụ, egwuregwu, Kọmputa, Cubicle Office na Ụlọ - Ngwa ntụ ntụ ụkwụ ụkwụ
Osote: Ụkwụ izu ike maka n'okpuru oche / Ergonomic High-ọkwa ebe nchekwa ụfụfụ n'okpuru oche na-edozi ịdị elu ụkwụ ụkwụ Rocker / Massage Textured Office Desk Foot Pillow Pad /Na-ebelata azụ na Ụkwụ mgbu
Ụkwụ izu ike maka ụlọ ọrụ nkasi obi ebighi ebi maka n'okpuru ...